Hargeysa: Xisbiga Kulmiye oo deeq Kubbado ah ku wareejiyay Kooxo Ciyaartoy ah | Somaliland.Org
Hargeysa: Xisbiga Kulmiye oo deeq Kubbado ah ku wareejiyay Kooxo Ciyaartoy ah
June 29, 2009	BubbleShare: Share photos – Easy Photo Sharing
Hargeysa (Somaliland.Org)- Xisbiga Mucaaradka ah ee Kulmiye ayaa Deeq Kubado ah ku wareejiyay Urur lagu magacaabo HYDA, kaas oo isna u qaybiyay Kooxaha Kubadda Cagta ee ka dhisan Xaafadda Jigjiga yar ee Magaalada Hargeysa.
Munaasibadda wareejinta Kubbadahan oo galabta lagu qabtay Garoonka Kubadda Cagta ee Dhallinta ee Xaafadda Jigjiga yar ee Magaalada Hargeysa, isla markaana ay ka qayb galeen Guddoomiye-xigeenka 2aad ee Xisbiga Kulmiye Cabdiraxmaan Cabdiqaadir, Cali Guuleed (Marshaal) oo ka mid ah Masuuliyiinta sar-sare ee Xisbigaas iyo Xil. Axmed Diiriye (Nacnac) oo ka mid ah Mudanayaasha Golaha Wakiilada kaga jira Xisbiga Kulmiye, ayaa waxa ugu horrayn halkaa ka hadlay Khaalid Aadan Cabdi oo ka socday Ururka HYDA, kaas oo ka guddoomay Deeqdan Kubbadaha ah Masuuliyiintan. “Haddaanu nahay Ururka HYDA, deeqdan Xisbiga Kulmiye waanu ka guddoonay, waxaananu u mahad-naqaynaa Masuuliyiinta Xisbiga ka socota ee Kubbadahan nagu wareejiyay.” Ayuu yidhi Khaalid Aadan.
Dhinaca kale, waxa isna halkaa ka hadlay Cali Guuleed (Marshaal) oo ku hadlayay Afka Xisbiga Kulmiye. “Anagu Kulmiye ahaan waxaanu aaminsanahay in aad tihiin kuwa waddanka u soo koroya dhalinyaro haddaad tihiin. Waxaanu doonaynaa Xisbi ahaan, si aad tahriibta uga joogtaan, isla markaana laydiinka ilaaliyo waxyaabahan la cabbo inaad tartan, Kubaddo iyo Ciyaaraha aad ku dedaashaan. Anaguna dhinacayaga, inkasta oo wax la sheego aanay ahayn, haddana tani waa bilow, Xaafadaha oo dhan waanu gaadhsiinaynaa.” Ayuu yidhi Md. Cali Guuleed.
Cali Guuleed waxa uu ka warbixiyay sababta Kulmiye ahaan ku dhalisay in ay qaybiyaan Kubbadahan oo ilaa 9-Kooxood ay u qaybiyeen. “Fikraddan waxa nagu dhaliyay, maalin dhawayd Aniga oo meel halkaas ah soo socda, ayaa waxa I joojisay Koox dhalinyaro ah oo Kubbad Ciyaaraysay. Waxay igu yidhaahdeen, adeer na sii qaad. Markii aan waydiiyay halkay tagayaan-na, waxay ii sheegeen in Kubbaddii ka banjartay (bilaa naqas ka noqotay) oo ay soo banjarinayaan. Waan qaaday, dabadeed markii aaan Banjarlihii geeyay, ayaan celiyay oo ay halkii Kubbadii ka bilaabeen. Taas ayaa nagu dhalisay Xisbi ahaan, markii aanu aragnay in Kubbad yar oo jeex-jeexan ay sitaan oo waliba laba Kooxood ay ku ciyaarayaan, in wixii aanu gacan ka geysan karayno ka geysano.” Ayuu yidhi Cali-Marshaal.
Cali wuxuu kula dardaarmay dhalinyaradaas inay Tacliinta iyo waxbarashada sii wadaan, isla markaana wuxuu ka digay Tahriibta oo uu ku wargeliyay in aanay meel gaadhsiinayn oo ay mustaqbal la’aan tahay. “Waxaad qiimo ku yeelanaysaan waa tacliinta ee sidaas ayaynu isku ognahay. Anagu xisbi ahaan, waxba idinkagama rabno oo Nin walowba ciddaad doonto ayaad u codaynaysaa. Laakiin, tani waa mid aanu doonaynoo in aad sii horumarisaan oo aad waxa xun kaga mashquushaan.” Ayuu yidhi Cali Guuleed. Waxaanu ballan-qaaday in Dirayskii iyo Kabihii Kubbadda lagu ciyaarayayna ay Xisbi ahaan qaybin doonaan.